août 2017 - Page 3 sur 51 -
Fambolena : Tombony lehibe amin’ny fampandrosoana
Faritra mamokatra sy mitondra tombontsoa betsaka eo amin’ny toe-karena malagasy raha ny fambolena ao amin’ny faritra Analanjirofo no jerena, tazana hatrany anefa ny fahavononan’ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tokony. Voalohany amin’ izany ny minisiteram-panjakana miadidy ny fambolena sy …Tohiny
Fikambanana FIANTA : Nandamoka ny fifidianana natao omaly
Haverina amin’ny fotoana manaraka izay mbola tsy voafaritra hatreto. Izay no azo hamintinana ny fifidianana nokarakarain’ny Fikambanan’i Antemoro eto Antananarivo (FIANTA), omaly tetsy amin’ny sekoly Sainte Famille (Mahamasina). Noho ny fomba fijery samihafa na mifanohitra …Tohiny
«Ranom-bary tsy masaka!»
Anisan’ny vaovao nitana ny sain’ny maro ilay fitifirana ho faty ny masoivohon’i Malezia farany teo tetsy Tsaralalàna iny. Aleo ho an’ny mpitandro filaminana ny hamoaka ny marina mikasika iny vonoan’olona iny fa ny adihevitra eto …Tohiny
Antsakabary : Noraisin’ny fanjakana ary efa manomboka ny fanarenana ara-tsosialy
Niteraka fahasahiranana samihafa ho an’ny mponina tany Antsakabary ny zava-nitranga tany ny volana febroary lasa teo. Efa nitondra fanampiana sy fanohanana aza ny fanjakana, nefa mbola tsy nisitraka izany ny ankamaroan’ny mponina. Enim-bolana aty aoriana, …Tohiny